रुँदा आँखाबाट आँशु किन बग्न थाल्छ ? धेरै मानिसहरूलाई वास्तविक कारण थाहा छैन …. – Ramailo Sandesh
मान्छे रुँदा आँखाबाट आँशु निस्कन्छ । तर यसको कारण के तपाईलाई थाहा छ ? आज हामी तपाईलाई बताउनेछौँ कि मानिस किन रुन्छन् र रुँदा उनको आँखाबाट आँशु किन आउँछ ?
रोएको कसैलाई मन नपर्ला, तर माया र दुःखका धेरै कारणहरू छन् जसले गर्दा मानिसहरूको आँखाबाट आँशु बग्न थाल्छ। आँसु हाम्रो मूडसँग सम्बन्धित छ। तर के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि हामी रुँदा हाम्रो आँखाबाट आँशु किन स्वतः निस्कन्छ ?
तपाईलाई भनौं कि आँखामा आँशु आउनुको कारण पूर्णतया वैज्ञानिक छ । आज हामी तपाईलाई यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बताउन गइरहेका छौं।
रुनुका धेरै कारण छन्
हामी तपाईलाई बताउछौं कि मानिसको आँखाबाट आँशु कुनै दुख, समस्या वा चरम खुशीको अवसरमा मात्र नभई अनुहारमा विशेष गन्ध वा तेज हावाका कारण पनि आउँछ। यसबाहेक प्याज काट्दा आँशु आउनु सामान्य कुरा हो ।
आँशु तीन प्रकारका हुन्छन्
वैज्ञानिकहरूले आँशुलाई मुख्यतया तीन वर्गमा विभाजन गरेका छन् । आँशुको पहिलो श्रेणी बेसल हो। यी गैर-भावनात्मक आँशु हुन्, जसले आँखालाई सुक्नबाट जोगाएर स्वस्थ राख्छ। दोस्रो श्रेणीमा गैर-भावनात्मक आँशु समावेश छ। यी आँसुहरू विशेष गन्धको प्रतिक्रियाबाट आउँछन्, जस्तै प्याज काट्दा वा फिनाईल जस्ता कडा गन्धबाट आँशु आउँछ।
रुँदाखेरी बग्ने आँशु भावनात्मक हुन्छ
यसपछि तेस्रो श्रेणीको आँशु आउँछ जसलाई क्राइङ टियर्स भनिन्छ। रुनु आँशु भावनात्मक प्रतिक्रियाको रूपमा आउँछ। वास्तवमा, मानव मस्तिष्कमा एक लिम्बिक प्रणाली छ, जसमा मस्तिष्कको हाइपोथ्यालेमस हुन्छ। यो भाग स्नायु प्रणाली संग प्रत्यक्ष सम्पर्क मा छ। यस प्रणालीको न्यूरोट्रान्समिटरले संकेत दिन्छ र हामी भावनाको चरम अवस्थामा रुन्छौं। मानिस दुखमा मात्र होइन रिस वा डरले पनि रुन थाल्छ र आँखाबाट आँशु बग्न थाल्छ ।
प्याज काट्दा किन आउँछ आँशु ?
आँखामा आँशु आउनुको सबैभन्दा ठूलो कारण प्याजमा पाइने रसायन हो । यसलाई syn-propanthyl-s-oxide भनिन्छ। प्याज काट्दा यसमा पाइने यो रसायनले आँखामा रहेको लैक्रिमल ग्रन्थीलाई उत्तेजित गर्छ, जसका कारण आँखाबाट आँशु आउन थाल्छ । प्याज काट्दा आँशु नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसका लागि काट्ने तरिका बदल्नुपर्छ ।
रुनुका धेरै फाइदा छन्
तपाईलाई थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ रुनुका धेरै फाइदाहरु। जब तपाईं रुनुहुन्छ, यसको माध्यमबाट तपाईंको शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छ। छोटो समयको लागि रुनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तपाईं तनावबाट मुक्त हुन र राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। रुँदा आँखा र पलकमा तरल पदार्थ आउँछ।
लगठनगाठोँ कस्दै देशकै सुपरहिट उपमेयर सुनिता डंगोल, यस्तो छ हुनेवाला श्रीमानको डिटेल्स !
जी–बब मात्रै दोषी छैन आज यो हालतमा पुग्न। सायद कही कतै बुबाआमाको पनि लापरवाही देखिन्छ